अपत्यारिलोसँग सुनको मुल्यमा गिरावट – Enepali Samchar
e nepaalisamchaar//काठमाडौँ– नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य घटेको छ । हिजोको तुलनामा आज नेपाली बजारमा तोलामा ४०० रुपैयाँले मूल्य घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।महासंघका अनुसार आज सुन प्रतितोला ९३ हजार ८०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । हिजो छापावाला सुनको मूल्य ९४ हजार २०० रुपैयाँ थियो ।
सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज तेजावी सुनको मूल्य ९३ हजार ३०० रुपैयाँ कायम भएको छ ।त्यसैगरि चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ । आज चाँदी १ हजार ३५० रुपैयाँ प्रतितोला कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौँ । वास्तुशास्त्रमा बताइएका कुरामाथि ध्यान दिने हो भने घरमा हरसमय सुख र शान्ति कायम रहन्छ। यहाँ बताइएका सजिला कामहरूमा विशेष ध्यान दिनुभयो भने घरमा नकारात्मक ऊर्जा हटेर सकारात्मकता ल्याउन सकिन्छ।
आज शुक्रबार धनको वर्षा हुने यी ४ राशिको भाग्य हेर्नुहोस्
अकस्मात् हातबाट यी चिज खसे ? सावधान ! श्रीमानमा आइपर्छ यस्तो संकट
अरूको सरकारमा गए अराजनीतिक मेरो सरकारमा आए राजनीति: प्रधानमन्त्री